Dowladda oo isu diyaarineysa iney “Aas Qaran” u sameyso Wasiirkii Dastuurka Soomaaliya – Kalfadhi
Xukuumadda Soomaaliya ayaa isu diyaarineysa in ay “Aas Qaran” u sameyso Wasiirkii Dastuurka Soomaaliya, Cabdi Xoosh Jabriil, oo shalay si lama filaan ah ugu geeriyooday magaalada Dubaay ee Isutaga Imaaraadka Carabta. Reysal Wasaaraha Soomaaliya, Xasan Cali Kheyre ayaa magacaabay Guddi heer Wasiir ah, oo arrintaas ka shaqeeya.
“Waxaan magacwnay Guddi Qaran oo ka shaqeeya Aas Qaran oo loo sameeyo wasiirka” ayuu yiri Reysal Wasaaraha Soomaaliya. Waxa uu sheegay inuu xukuumaddiisa ka baxay wasiir ka mid ah xubnahii ugu shaqada adkaa xukuumaddiisa. “Waxaa maanta xukuumaddeyda ka baxay wasiiradii ugu hawlkarsanaa mid ka mid ah” ayuu yiri Kheyre.
Shacabka Soomaaliyeed ayuu Reysal Wasaaruhu ugu baaqay in ay kaalin mug leh ka qaataan maamuusidda aaskaas qaran ee uu ku dhawaaqay, waxaana, sida uu sheegay, hogaamin doona Reysal Wasaare Kuxigeenkiisa, Mahdi Maxamed Guuleed. “Waxaan rajeynaa in la keeno meed marxuumka, oo aan kuligeen kawada qeyb qaadano aaska” ayuu Reysal Wasaaruhu ku yiri fiidiyow la soo dhigay bogga Xafiiskiisa.
Guddiga la magacaabay, oo kulan yeeshay, waxa uu sheegay in ay ka shireen sidii ay sida ugu fiican oo ay kari karaan ugu sameyn lahaayeen “Aas Qaran” Allaha u naxariistee Wasiir Xoosh. Wasiirka Arrimaha Dibadda, Axmed Ciise Cawad, ayey SONNA qortay inuu sheegay in ay aaska marxuumka si wanaagsan u diyaarinayaan.
Geerida Wasiir Xoosh, oo sida la sheegay deg deg ahayd, ayaa timid wax yar kadib markii uu Dubaay ku bixiyey gabar uu dhalay, oo halkaas lagu mehriyey. Waxaana sida uu Kalfadhi u sheegay Agaasime ka mid ah Wasaaraddiisa, Cabdiqani Seed, uu qabay xanuun markii uu u kicitimaayey Dubaay, hase ahaatee ulama muuqan mid halis badan.
Geeridaas waxaa ka naxay, kana tacsiyeeyey, qeybaha bulshada – hogaanka dowladda oo dhan, xildhibaanno, wasiiro, ganacsato, siyaasiyiin iwm, kuwaas oo qaarkood ka faalloonayey wanaagga shaqsiyadeed, kartida, aqoonta iyo waaya-aragnimada uu u lahaa ka shaqeynta Dastuurka Soomaaliya, oo ay xukuumaddu dhawr mar ku celcelisay inuu meel gaba-gaba ah maraayo.
Warbixin – Maxaad ka ogtahay doorka hoggaaminta guddiyada joogtada ah ay ku leeyihiin xildhibaanada cusub ee golaha wakiillada Puntland?